sainam-pirenena fa Fanjakana Mitambatra
A. Louis London dia injeniera teraka ny 31 Aogositra 1913 ary maty ny 19 Martsa 2008
I Angletera (anglisy: England) dia ampahany lehibe indrindra ao amin'ny nosin'ny Britaina Lehibe sy ny Fanjakana Mitambatra. I Angletera dia ao amin'ny ampahany manontolo ao atsinanan'i Kambria (anlisy: Walles) sy ao atsimon'i Skotia (anglisy: Scotland). I Londra (anglisy: London) no renivohiny, izay tanàna lehibe dia lehibe sady seranatsambo lehiben'i Angletera, izay ahitana mponina miisa maherin'ny 7.000.000 tamin'ny taona 2001. Ity tanàna ity ihany koa no renivohitry ny Fiombonan'ny firenena miteny anglisy (anglisy: Commonwealth of Nations). Miendrika telolafy i Angletera la ny tendrony ambony dia eo amin'ny vinanin'ny renirano Tweed, eo am-tsisintany isarahana amin'i Skotia. Ny Ranomasina Avaratra no ao atsinanany, ny Ranomasin'i Irlandy sy i Kambria ary ny Ranomasimbe Atlantika no ao andrefany. Ny ao atsimo dia ny Lakandrano Anglisy (frantsay: La Manche) sy ny Andilandranon'i Dover (fratsay: Pas de Calais). Manana velaran-tany mirefy 131 760 km2 i Angletera.
Ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy dia dikan-tenin'ny Baiboly amin'ny teny malagasy ampiasain'ny fiangonana protestanta miteny malagasy amin'ny fotoam-pivavahana. Ny edisiona tamin'ny taona 1909 izay nasiam-panitsiana madinika tamin'ny taona 1965 no ampiasaina amin'izao. Io Baiboly io no ampiasain'ireo Fiangonana protestanta toy ny Fiangonan'i Jesoa Krisy eto Madagasikara, ny Fiangonana Loterana Malagasy, ny Eklesia Episkopaly Malagasy sns. sy ireo Fiangonana evanjelika sy pentekotista maro manerana an'i Madagasikara.
David Edward Hughes dia mpitendry mozika, mpamorona, mpahay fizika mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra, Etazonia teraka ny 16 Mey 1831 tao London ary maty ny 22 Janoary 1900 tao London
Ny fiteny arabo dia fiteny semitika izay tenenina ao avaratr'i Afrika ary any Azia Andrefana. Io fiteny io dia anisan'ny fiteny ofisialin'ny Firenena Mikambana ary ny fiteny ofisialy tokan'ny Liga Arabo. Raha atambatra ny olona miteny arabo eo amin'ny firenena rehetra izay lazaina fa miteny arabo ofisialy, dia eo amin'ny 240 tapitrisa eo ho eo ny isan'ny mpiteny arabo.
Ny fiparitahan'ny teny arabo ankehitriny dia avy amin'ny hery ara-tafiky ny Mozilmana izay tonga nanaparitaka ny fivavahana silamo ary ny finiavan'ny kalifa (izay mibaiko ny mpino) ary ny mpino manaparitaka ny finoana silamo eran'ny tany. Ny boky masin'ny Silamo, dia ny Kor'any izay nosoratana tamin'ny teny arabo, no manome lanja ny fiteny arabo eo anivon'ny mponina mozilmana eran-tany.
Noho ny fiparitahan'ny fiteny arabo dia samihafa ny fiteny an-tsoratra ary ny fiteny tenenina. Ao amin'ny fiteny an-tsoratra dia ahitana ny arabo klasika (arabo talohan'ny Kor'any, arabon'ny Kor'any ary arabo taorian'ny Kor'any), ary ny arabo ankehitriny. Ny atao hoe arabo tenenina na arabo isan-toerana dia ny fitenim-paritra arabo rehetra.
Fritz London dia mpahay fizika mizaka ny zom-pirenen'i Alemaina, Etazonia teraka ny 7 Martsa 1900 ary maty ny 30 Martsa 1954 tao Durham, North Carolina
Geoffrey Chaucer dia Poeta, mpanoratra, mpanao asa soratra, filôzôfy, mpanao politika mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra teraka ny 1 Janoary 1343 tao London ary maty ny 3 Novambra 1400 tao London
George Arliss dia mpilalao, mpanoratra, mpanoratra tantara tsangana, talen-koronantsary, mpanoratra ny tantaran'ny fiainany mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra teraka ny 10 Aprily 1868 tao London ary maty ny 5 Febroary 1946 tao London
Hong Kong (sinoa: 香港), fomba ofisialy fantatra amin'ny anarana hoe ny Hong Kong manokana Administrative faritr'i ao amin'ny Repoblika Entim-Sina, dia tanàna teo amin'ny ilany atsimon'i morontsiraka ao Shina tao amin'ny Pearl River Estuary sy ny South China Sea.Hong Kong tsara fantatra amin'ny velabelarina be skyline, lalina voajanahary seranan-tsambo ary tena mponina (fito tapitrisa ny faobe tany 1.104 km2 (426 INSEE)). Ny ankehitriny Hong Kong mponina 93,6% ahitana ny adim-poko Sinoa. Ny ampahany lehibe Hong Kong ny Cantonese-miteny maro an'isa avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina, ao amin'ny faritanin'i (ankehitriny Guangdong), izay ny mpiasa mahay nandositra taorian'ny fitondrana kominista nitondra ny Shina tamin'ny 1949 ary taty aoriana voadiony ny mponina tamin'ny 1960.
Ny anaram-pirenena "India" dia avy any amin'ny fiteny Persana Sindhu, anarana persana amin'ny fiteny Sanskrity, ny renirano Indus. Ny anarana ofisialy ofisialy dia mampiasa ny teny Bharat (mpanjaka hindoa niaina tamin'ny taona taloha). Ny anarany faha telo: Hindustan ("tanin'ny Hindoa" amin'ny fiteny persana), dia niasa tamin'ny taonan'ny Empira Môgôly, ilay teny Hindustan dia tsy ofisialy intsony ankehitriny fa ampiasaina matetika rehefa manonona an'i India.
I India ny firenena be olona indrindra eo aorian'i Sina. Misy fiteny ofisialy roapolo mahery fantatry ny lalam-panorenan'i India. Ny tenim-pirenena dia ny fiteny hindy.
Mivelatra 7 arivo kilometatra ny amorontsirak'i India. Mizara sisintany amin'i Pakistana izy any andrefana, miaraka amin'i Sina, i Nepaly, i Bhutan izy any avaratra. I Bangladesa sy ny Mianmara any atsinanana. Eo amin'ny ranomasimbe Indianina, tsy lavitry ny repoblikan'i Maldiva (any atsimo andrefana), ny Seilàna (any atsimo atsinanana). Mizara sisintany miaraka amin'i Afganistàna koa i India any Avaratra Atsinanany.
Inigo Jones dia mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra teraka ny 15 Jolay 1573 tao London ary maty ny 21 Jiona 1652 tao London
Isaac Barrow dia mpanao matematika teraka ny 1 Oktobra 1630 tao London ary maty ny 4 Mey 1677 tao London
Jack London dia mpanoratra, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava, mpanoratra fanoharana, mpanoratra ny tantaran'ny fiainany mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia teraka ny 12 Janoary 1876 tao San Francisco ary maty ny 22 Novambra 1916
John Milton dia mpanoratra, Poeta, mpanao asa soratra mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra teraka ny 9 Desambra 1608 tao London ary maty ny 8 Novambra 1674 tao London
Ny London Missionary Society (LMS), izay azo atao amin'ny teny malagasy hoe "Fikambanana Misioneran'ny Londra", dia fikambanana misionera kristiana tsy miankina amin'ny fiangonana, niorina tao Angletera tamin'ny taona 1795. Kristiana protestanta (anglikana, evanjelika, kongregasionalista, batista, metodista sns.) no mikambana ao aminy tamin'izany taona izany. I Edward Williams no nanangana azy. Io fikambanana io no nipoiran'ny misiona kristiana maro izay nampiely ny fivavahana kristiana tany Azia Atsinanana sy tany amin'ireo nosy ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika ary taty Afrika atsimon'i Sahara, isan'izay ny taty Madagasikara.
Nahavita be ny London Missionary Society noho ny nahombiazany tamin'ny fampidirana ny fivavahana kristiana taty Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19.
Amin'izao fotoana izao dia mikambana ao amin'ny Council for World Mission (CWM) ny London Missionary Society. Isan'ny misionera irahiny amin'izao i David Livingstone izay nitory ny Filazantsara tany amin'ny faritr'i reo Farihy Lehibe any Afrika afovoany, sy i Robert Morrison ilay mpandika teny malazan'ny Baiboly amin'ny fiteny sinoa, ary ilay sinologa James Legge.
William Thomas Blanford dia mpahaisiansan-javaboahary mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra teraka ny 7 Oktobra 1832 tao London ary maty ny 23 Jiona 1905 tao London